Copries : betsaka ny asa miandry amin’ny fampandrosoana ny oniversite | NewsMada
Copries : betsaka ny asa miandry amin’ny fampandrosoana ny oniversite
Nikaon-doha nandinika ny fanatsarana ny tontolon’ny fampianarana ambony ireo filohan’ny oniversite manerana ny Nosy. Mbola betsaka ny asa miandry amin’ny sehatrasa maro indrindra ny fametrahana ny rafitra LMD.
Notanterahina ny alakamisy teo, tao amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika, Fiadanana, ny fihaonamben’ny filohan’ny oniversite sy ny rektoran’ireo ivotoeram-pampianarana ambony manerana ny Nosy (Copries). Fivoriambe voalohany natao taorian’ny fifidianana ireo filohan’ny orniversite rehetra ity natao ny alakamisy teo ity.
Tapaka nandritra ny fihaonana ny tetiandron’ny fametrahana amin’ny fomba ofisialy ireo filohan’ny oniversite manerana ny Nosy.
Ankoatra izany ny fanatanterahana ny atrikasam-pirenena handinihana ny fametrahana ny rafitra LMD izay hotanterahina any Toamasina ny 11 ka hatramin’ny 13 jolay ho avy izao.
Handrafetana ny politikam-pirenena momba ny fampianarana ambony izay rehetra voadinika mandritra izany zaikabe izany.
Nifantohan’ny ady hevitra ihany koa ny fanafohanana tsikelikely ny vatsim-pianarana ho an’ny taona voalohany. Hojerena ny fampiharana izany sy ny mety ho fahombiazany ary ny fiantraikany amin’ny mpianatra.
Mikasika ny fanadinana nasionaly ho an’ny paramédicaux, hatsangana haingana ny sampan-draharaha misahana ny fanadinana eo anivon’ny minisitera sy isaky ny oniversite rehetra.
Eny anivon’ny trano fonenan’ny mpianatra, ampiasaina ny paikady japoney amin’ny fampiharana ny 5S, kaizen ary TQM hisian’ny fahadiovana sy ho fitsinjovana ny fahasalaman’ny mpianatra.
Mihevitra ny hiala amin’ny fitantanana ny trano fonenan’ny mpianatra ihany koa ny oniversite ka hahaleo tena tanteraka ny fitantanana izany trano izany hisian’ny mangarahara sy ny gaboraraka.
Voadinika sahady ihany koa ny mety hisian’ny fitsaharan’ny fampianarana mandritra ny fivoriamben’ny tany miteny amin’ny ampahany na manontolo ny teny frantsayizay horaisina eto amintsika ny 20 ka hatramin’ny 26 novambra ho avy izao.